Izindaba - Uyazi ukuthi ungenza kanjani amabhodlela engilazi？
Inqubo ukukhiqizwa ingilazi amabhodlela ikakhulu kuhlanganisa: ① Raw impahla pre-ukucutshungulwa. Choboza izinto zokusetshenziswa eziyinqwaba (isihlabathi se-quartz, i-soda ash, i-limestone, i-feldspar, njll.) Ukomisa izinto zokuswakama ezimanzi, bese ususa izinto zokusetshenziswa eziqukethe insimbi ukuqinisekisa ikhwalithi yengilazi. ② Ukulungiswa kwe-batch materials. ③ Ukuncibilika. Izinto zengilazi ze-batch zifudunyezwa ekushiseni okuphezulu (1550 ~ 1600 degrees) esithandweni sechibi noma esithandweni somlilo ukuze yenze ingilazi ewuketshezi efanayo, ngaphandle kwamabhulebhu, futhi ihlangabezana nezidingo zokubumba. OrmUkubumba Faka ingilazi ewuketshezi kwisikhunta ukwenza imikhiqizo yengilazi yomumo odingekayo, njengamacwecwe ayizicaba nezitsha ezahlukahlukene. Treatment Ukwelashwa ngokushisa. Ngokuncishiswa, ukuqedwa kanye nezinye izinqubo, ukucindezeleka, ukwehlukaniswa kwesigaba noma ukufakwa ngekristalu ngaphakathi kwengilazi kuyasuswa noma kwenziwe, futhi isimo sesakhiwo sengilazi siyashintshwa.
Okokuqala, isikhunta kufanele senziwe futhi senziwe. Ingilazi eluhlaza okwenziwe ngengilazi isebenzisa isihlabathi se-quartz njengezinto eziphambili ezisetshenzisiwe, nezinye izinto ezisizayo ziyancibilika zibe uketshezi emazingeni aphezulu okushisa, bese zifakwa kufolomu, zipholile, zisikwe futhi zifuthwe ukwakha ibhodlela lengilazi. Amabhodlela engilazi ngokuvamile anezimpawu eziqinile, futhi izimpawu nazo zenziwe ngomumo wesikhunta. Ngokwendlela yokukhiqiza, ukwakheka kwamabhodlela engilazi kungahlukaniswa kube yizinhlobo ezintathu: ukushaya ngesandla, ukushaya ngomshini nokubumba kwe-extrusion. Ngokwakheke, amabhodlela engilazi angahlukaniswa abe yizinhlobo ezilandelayo: Okokuqala, ingilazi yesoda, okwesibili, ingilazi yomthofu, eyesithathu, ingilazi ye-borosilicate
Izinto zokusetshenziswa eziyinhloko zamabhodlela engilazi ziyinsimbi yemvelo, itshe le-quartz, i-caustic soda, i-limestone, njll. Amabhodlela engilazi anezinga eliphakeme lokungafihli nokumelana nokugqwala, futhi ngeke aguqule izakhiwo zezinto zokwakha lapho ahlangana namakhemikhali amaningi. Inqubo yokukhiqiza ilula, ukuma kukhululekile futhi kuyashintsha, ubulukhuni bukhulu, buyamelana nokushisa, buhlanzekile, kulula ukuluhlanza, futhi bungasetshenziswa kaninginingi. Njengempahla yokupakisha, amabhodlela engilazi asetshenziswa kakhulu ekudleni, uwoyela, utshwala, iziphuzo, ama-condiment, izimonyo, nemikhiqizo yamakhemikhali ewuketshezi, njll., Futhi isetshenziswa kabanzi.
Isikhathi Iposi: Jun-28-2020